San Giovanni e Poggio, Vespro flat 80mq
Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ene-canopy kunye newodrophu efakiweyo, i-mezzanine enesibhakabhaka esikhulu esinebhedi ezi-2 ezingatshatanga.
Igumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yomlilo, iTV yescreen esicaba, ibhedi enkulu yesofa; ikhitshi elikhulu elinefriji, i-dishwasher kunye ne-oven; igumbi lokuhlambela elinendlu yokuhlambela, isixhobo sokomisa iinwele kunye nomatshini wokuhlamba. Ukusuka kwigumbi ngalinye ungonwabela umbono omangalisayo, kwaye yonke ifestile ibonelelwe ngenetha yeengcongconi eza kugcina iingcongconi zingekho kubusuku behlobo. Ngaphandle kukho indawo yokuphumla yabucala ene-pergola.
Intsapho yethu, iqhutywa luthando olunzulu ngamaphandle amahle akufuphi neSiena, yagqiba ekubeni ibuyisele indlu endala yasefama kwaye iyinike ubomi obutsha ngeprojekthi yokuvuselela ngomdla nangenyameko, eyaqhubeka ngaphezu kweminyaka emithathu. Namhlanje iSan Giovanni ePoggio ishushu kwaye ipholile ngexesha lasebusika, inokukhanya okuninzi, kwaye isabonelela ngekhusi elipholileyo, elinomthunzi ehlotyeni. Indlu yasefama ibonelela ngamagumbi amahle anedama lokuqubha kunye nemibono emangalisayo yepanorama.
Iphupha lethu lokunika iindwendwe zethu iholide ezele ziimvakalelo zokwenyani kumlingo welizwe laseSiena ngoku lizalisekile. ISan Giovanni ePoggio iya kukukhalisa ngeenduli ezikujikelezileyo ezijonge phezu kweVal d'Orcia entle, kufutshane nePienza, kwaye iya kukuvumela ukuba uchithe iintsuku ongalibalekiyo kwindawo ebhengezwe njengeSiza seLifa leMveli le-UNESCO.
Ngexesha lokuhlala kwabo iindwendwe zethu ziya kufumana "i-harmonic yokuphila", kuba iSan Giovanni ePoggio igcina kwaye ivakalisa bonke ukufudumala kunye nenkululeko yefama yakudala yaseTuscan.
Yonke imihla, ndifumaneka ekuseni kwaye ndihlala ndifumaneka kuwo nawuphi na umcimbi.